Qasnadda ugu weyn ee Ruushka ayaa laga dhisi doonaa gobolka Volgograd - majaladda "Nidaamka Baradhada"
VTB waxay u furtay khad amaah ah shirkadda Ruspole Brands Group of Companies qaddarkeedu yahay 2,5 bilyan oo rubil muddo sideed sano ah oo loogu talagalay dhismaha kaneecada ugu weyn ee Ruushka loogu talagalay wax soo saarka alaabooyinka hoos timaad sumcadda Uncle Vanya. Maalgelinta waxaa lagu bixiyaa shuruudaha ka-tanaasulka iyadoo la raacayo barnaamij si wadajir ah loola fuliyay Wasaaradda Beeraha ee Xiriirka Ruushka.
Dhismaha warshad cusub ayaa ka socota Volzhsky, oo ah magaalo dayax gacmeed ku taal Volgograd. Waxqabadkeeda ugu weyni waxay noqon doontaa soo saarista wax soo saarka la shiiday ee khudaarta darayga ah iyo miraha ka baxa beeraha shirkadda ee gobolka. Awoodda naqshadeynta waa 40 milyan oo gasacadood sanadkiiba, noocyadu waxay ka koobnaan doonaan ilaa 100 shey. Marxaladda koowaad, shirkaddu waxay abuuri doontaa in ka badan 500 oo shaqo.
“Warshada cusub ee Ruspole Brands Group of Companies waa mid ka mid ah mashaariicda maalgashiga ee la taaban karo ee la bilaabay sanadka 2020 anagoo ka qeyb qaadaneyna barnaamijka wasaarada beeraha Waqtigaan la joogo, VTB waxay saxiixday in kabadan 3,5 kun oo heshiis oo hoos imanaya barnaamijka qadarka qiyaastii 400 bilyan oo rubi. Ku dhowaad nus ka mid ah muggan ayaa loogu talagalay ujeedooyin maalgashi. Qiyaasta la dhimay waxay u ogolaaneysaa beeraleyda inay yareeyaan kharashka ku baxaya hirgalinta mashaariicdooda ayna sii wadaan horumarka joogtada ah, iyagoo siinaya wax soo saar tayo sare leh macaamiisha gudaha iyo dibada, "ayuu yiri Ruslan Eremenko, Madaxa Waaxda Ganacsiga Shirkadaha ee Gobolka - Madaxweyne Ku Xigeenka VTB.
"Waad ku mahadsan tahay maalgelinta dhimista ee VTB, shirkadeena cusub waxay diyaar u noqon doontaa inay iibiso wax soo saarka ugu horeeya rubuca 4aad ee 2021, taas oo xaqiijin doonta koror sanadle ah oo ku saabsan calaamadda Uncle Vanya ee ugu yaraan 20% sanadkiiba," ayuu yiri Tigran Telunts, milkiilaha Ruspole Brands Group.
Tags: Gobolka Volgogradwarshad qasacadaysanka shaqaynta khudradda
Bandhiga Interregional "Agro-industrial complex" ayaa lagu qaban doonaa bartamaha Maarso magaalada Volgograd
Canshuuraha Platon ayaa kici doona laga bilaabo Febraayo 1